Nepal America Journalists' Association - (NEAJA), USA
नेजाको वार्षिक प्रकाशनका लागि लेखरचना आब्हान
हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेजाले वार्षिक प्रकाशन प्रयास प्रकाशन गर्दैछ । तसर्थ नेजाका सल्लाहकार,पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी , सदस्यहरु र पत्रकारहलाई नेजा,नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारिता क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीत भएर बढीमा एकहजार पाँचसय शब्दसम्मका लेख,रचना यही मार्च मसान्तसम्म इमेल ठेगाना gautam28@hotmail.com वा najausa@gmail.com मा उपलब्ध गराई प्रकाशन कार्यमा सहयोग गर्नु हुन आग्रह गर्दछौं । बाँकी समाचार...
नेजा-बद्रीकुल ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार दरखास्त आह्वान
अमेरिकामा रहेका नेपाली सञ्चारकर्मीहरुको साझा संस्था नेपाल-अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) ले प्रत्येक दुर्इ वर्षमा ‘नेजा-बद्रीकुल ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आएको छ । यो पुरस्कार नेपालका ग्रामीण भेगमा रहेर त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सञ्चारकर्मी वा सञ्चारसंस्थालाई प्रदान गरिनेछ । पुरस्कारको राशी १११११११.११ (एक लाख एघार हजार एक सय एघार रुपैयाँ एघार पैसा) रहेको छ । बाँकी समाचार...
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाको सदस्यता वितरण धमाधम
नेपाल अमेरिका पत्रकारसंघ नेजाको आगामी महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै सदस्यता वितरण र नविकरणको प्रकृया चलिरहेको छ । नेजाको चौथो अधिवेशन आगामी मे महिनाको २, ३ र ४ मा अमेरिकाको टेक्सासको ह्युस्टनमा हुने भएको छ । सदस्यता वितरणका लागि मिडिया संयोजक सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सबै क्षेत्रीय सदस्यहरु रहनेगरी समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसमा केन्द्रीय सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरुले पनि सघाउनेछन् । त्यसका लागि सबै क्षेत्रीय सदस्यहरुले नयाँ सदस्यहरुको विवरण र नविकरणको विवरण पनि तत्काल संयोजक सूर्य थापामार्फत सचिवालयमा पठाउने भएका छन् । सदस्यता शुल्क र नविकरण शुल्क बुझाउनका लागि तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोला । बाँकी समाचार...
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को सदस्यता वितरण तथा नविकरणका लागि आव्हान । नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) ले हरेक दुई वर्षमा अधिवेशन गर्दै आएको कुरा त यहाँहरुलाई नै अगवत नै छ । यसै सन्दर्भमा आगामी मे ३ र ४ तारिखमा टेक्सासको ह्युस्टनमा हुन लागेको अधिवेशनलाई ध्यान राखेर नेजाको सदस्यता वितरण तथा नविकरण कार्य जारी रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं । नेजाको नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि तथा नविकरण गर्नका लागि नेजाको आधिकारिक वेभसाईट नेजा युसए डटकममा गएर फर्म भर्न सकिनेछ । बाँकी ...
अमेरिकामा नेपाली पत्रकारिता र सोक्रेटसको गुफा
हामीले घरघरमा सानासाना पोखरीहरु बनाउछौं, अनि त्यो पोखरीमा परेको सूर्यको छायाँलाई वास्तविक सूर्य ठान्छौं । हामीले सबैले आफू आफूलाई ति एकएकवटा सूर्यको मालिक पनि सम्झन्छौं । अनि घमण्ड गर्छौ, मसँग छ सूर्य । म सूर्यको मालिक हुँ । हुनपनि हामी सबैले घरमा पोखरी बनाएका छौं, सबैको घरको पोखरीमा सूर्यको छाया पनि छ । सबैले त्यसैलाई वास्तविक सूर्य पनि ठान्दै आएका छौं । अनि घमण्ड त हुने नै भयो । बाँकी...
एउटा असल मानिसको आवश्यकता
समय अनुसार वा मानवीय स्वभाव र चेतना अनुसार स्रष्टा(कवि,लेखक,कलाकार)हरुले समय समयमा देश र जनताका दुखका पुकारा व्यक्त गर्ने तरिका पनि अलग अलग हुने गर्दो रहेछ । हिजो गोपाल प्रसाद रिमाल वा भूपी शेरचनहरुले पनि नेपाली जनका दुख पुकारा नै ब्यक्त गरि रहेका थिए । कालक्रममा अरु धेरै थपिए । नाम लिंदा बाँकी धेरै माथि अन्याय पनि पर्न सक्छ तर पनि नामै लिनु पर्दा केही प्रतिनिधी पात्र मात्र सम्झनु जाति । त्यस क्रममा कुलपति वैरागी काईलाको आयामेली किताको कुरा गरे नि भो । भवानी घिमिरेहरुको भोक कविता होस् वा किशोर झुत्रेहरुको बुट पालिस अभियान । राल्फा वा संकल्प परिवारको सम्बन्धमा बर्तमान पुस्ता बेखर ठान्नु अपमान गर्नु नै होला । बाँकी...
अन्तर्मनमा सगरमाथाको यात्रा - जुनिता सुब्बा कुरो २००८/०९ सालको हो। एकदिन अचानक इमेल खोल्ने क्रममा एउटा इमेल पाँए ।सगरमाथा आरोहण सम्बन्धि थियो ।बास्तबमा त्यो इमेल पठाउने मान्छे को हो? कहाँ हुनु हुन्छ ? आज पनि मलाई थाहा छैन । S .w .नामले चिनिनु हुने उहाँ जो जहाँ हुनु भएपनि उहाको उत्प्रेरणा भने मेरो लागि जिबनको कोसे ढुङ्गो साबित भयो । म उहाँलाई हृदय देखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । त्यो दिन यस्तो लाग्यो मेरो मस्तिस्कमा एउटा घटना घट्यो । त्यसपछि म भित्र भित्रै एकाएक सगरमाथा आरोहण गर्ने अठोट गरे । बाँकी...